I-WOWOW 3 Inkqubo yeshawari eSebenzayo enePaneli yeshawa yemvula yeBrass kunye neHandheld kunye neFaucet-IiFaucethi zaseKitchen ezigqwesileyo 2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iinkqubo zokuhlamba / WOWOW 3 Umsebenzi Shower System kunye Brass Imvula Shower Panel kunye Handheld kunye Faucet
WOWOW 3 Function System Ukuhlamba System Brass Imvula Shower Panel kunye Handheld kunye Faucet
Le nkqubo yeshawa yanamhlanje kunye neyobunewunewu ifaka uyilo olwaneleyo lwangoku, obutofotofo, obulula kunye nesisa, obunokwenza isitayile sangoku kunye nesitofotofo kwindawo yokuhlambela. Le nkqubo yokuhlamba ikumgangatho ophezulu ibandakanya intonga yeshawari, ngaphezulu kuhlamba intloko, ishawa kunye nesepha yokuhambisa amanzi, enokunika amava okuhlamba kunye nexesha lokuhlamba.
Izixhobo ezikumgangatho ophezulu: yenziwe ngobhedu ekumgangatho ophezulu, ekumeleleni, kuxinzelelo oluphezulu, kuthintela ukwanda, kuthintela ukukhula kwentsholongwane, kwaye ungangcolisi amanzi. Umbhobho weshawa wenziwe ngentsimbi engenacici, ithambile kwaye iyoluka, ayimelani noxinzelelo oluphezulu kunye nokudubula, ukumelana nokubola kunye nobomi benkonzo ende.
Iindidi ezintathu zeentloko zeshawari ezibanjwe ngesandla: Ishawa ebanjwa ngesandla ineendlela ezintathu zokuphuma kwamanzi: imvula, ukuthambisa, kunye nokuthambisa kwemvula. Ungatshintsha ngokulula phakathi kweendlela ezahlukeneyo zokuphuma kwamanzi ngesandla esinye.
Itephu yamanzi yokuhlambela ingxangxasi yamanzi: I-thermostat inokuqinisekisa ngolawulo oluthe rhoqo noluchanekileyo lobushushu. Ibhafu yokuhlambela inokufakwa kufutshane neshawa ngokuhambelana neemfuno ezithile zebhafu yakho, ekulula kakhulu ukuyisebenzisa ebhafini.
Gcwalisa izixhobo: Ngeeshawari ezingaphezulu, ishawa kunye nebhafu yetephu, exhotyiswe ngombhobho wokuhlamba we-150 mm kunye nombhobho wokudibanisa we-80 mm. Nceda uqaphele: Ukuphakama okupheleleyo kwenkqubo yokuhlamba yi-1044 mm kwaye akunakulungiswa.
Iwaranti yeminyaka emi-5 ethembekileyo: Apha e-WOWOW, siyazingca ngomgangatho weepompo zethu zeshawari yiyo loo nto ukufakela kulula, iinxalenye zenziwe ngezinto ezisemgangathweni, kwaye yonke iodolo iza nomgaqo-nkqubo wokubuya weentsuku ezingama-90. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso zethu, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nanini na.
iindidi: Shower Imibhobho, Iinkqubo zokuhlamba tags: ishawa ebanjwe ngesandla, mihla, inkqubo yokuhlamba
Ubhedu olubunjwe nge-Chrome
Iphaneli yokuhlamba eyahlukileyo
LED Ukuhlamba Faucet Set Thermostatic Gqibezela Sho ...
WOWOW 5 Ukubeka iNtloko yokuhlamba nge-Handheld, ePhakamileyo ...
Ukuhlamba i-Thermostatic Cwangcisa uMnyama ngokuHamba ngesandla
WOWOW 48 Imisebenzi Dual Rain Ukuhlamba iNtloko yeNkqubo ...